Email ROI: Ma Jirto Maskax Shirkad Weyn | Martech Zone
Monday, August 13, 2007 Talaado, July 15, 2014 Douglas Karr
Waxaan maanta kulan aad u qurux badan la yeelanay shirkad wadani ah waxaanna ka wada hadalnay in meel la dhigo barnaamijka emaylka. Shirkaddu waxay ka badan tahay macaamiisha 125,000 waddanka oo dhan, 4,000 oo iibiyeyaal ah… mana jiro barnaamij emayl. Waxay hayaan 8,000 oo alaab ah oo leh 40 ama 50 alaab cusub bil kasta oo soosaarayaashu u dhimanayaan inay iibiyaan. Waxay ka walwalsan yihiin qiimaha barnaamijka emaylka inkasta oo ay isweydiinayaan halka lacagtu ka imanayso.
Kani waa mid ka mid ah cilaaqaadkaas aan jeclaan lahaa inaan isku soo uruuriyo iyada oo aan wax kharash ah ku bixin oo aan si fudud komishanka ugu soo oogo!
Tusaalaha kor ku xusan, waxaan qiyaasayaa inay heli karaan cinwaan emayl ah 1dii macaamilba 3 dhamaadka sanadka. Xaqiiqdii, barnaamijku waa inuu soosaaraa xiiso badan iyo emayllo badan oo dheeri ah, laakiin waxaan rabaa inaan ahaado dhinaca nabdoon. Waxaan qiyaasayaa 1 emayl bishiiba - maahan toddobaadle. Macaamiil kastaa wuxuu horeyba u sameeyaa wax soo iibsi bil kasta, sidaas darteed emaylku runtii wuu joogaa si uu isugu dayo inuu kordhiyo iibinta macaamiisha jira Waxaan ku tuuray qadarka jawaabta ee 0.75% celcelis ahaan (aad u muxaafid ah) $ 5 oo ah kharash dheeraad ah. Wixii Bixiyaha Adeegga Emailka ah, waxaan kudaray $ 0.03 emailkiiba… dhanka sare.
Iyada oo dhammaan qiyaasyadan muxaafidka ah, wax soo saarku weli waa wax laga naxo oo ah 25% Ku Laabashada Maalgashiga. Intaa waxaa sii dheer, emaylku wuxuu ku amri doonaa amarro dheeri ah iyada oo loo marayo boggooda e-commerce - iyadoo lagu keydinaayo amarro khaldan iyo kharashyada shaqaalaha. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo iibiyeyaashoodu ay yara jajabayaan xoogaa feejignaan ah, shirkaddu waxay ku iibin kartaa booska xayeysiinta qiimaha leh joornaaladahooda! Waxaan dib u eegay kharashka xayeysiinta hal warside warshad maanta celcelis ahaan xayaysiiskuna wuxuu ahaa $ 0.02 iimaylkiiba waxaana kujiray 4 baro joornaal kasta.
Iibinta 4 dhibic email kasta waxay ROI ku riixi doontaa kor 300%!
Waxaan hubaa inaan jeclaan lahaa inay ogaadaan sida ay u awoodaan tan.
Tags: qiimaha macmiilkaku soo celi emaylka maalgashigaganacsiku soo noqo maalgashigadakhliga halkii emaylqiimaha macaamiisha